Xirfadaha & Warshadaha Baararka - Shiinaha Ku -xirnaanta & Xirmooyinka Baararka Soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha
Labiska xiisaha leh waa inuu la socdaa cufflink shaqsiyeed ama baarka xarka. Waxay yihiin hadiyado ku habboon maalinta Aabbaha, qalin -jabinta, sannad -guurada, dhalashada, arooska ama ku saabsan hadiyad kasta oo la siinayo mar kasta oo ragga ah. Isticmaaluhu wuxuu ku dhejin karaa daboollada suudhka, shaadhadhka ama dharka rasmiga ah maalin kasta ama mar kasta oo la isticmaalo, halka hal baakad oo pc ah ay tahay inuu ahaado ururinta nin walba. Hadiyadaha Quruxda Badan leh waxay leeyihiin waayo -aragnimo 36 sano ah oo soo saarista cufflinks tayo sare leh iyo baararka xadhkaha, qaababku waxay noqon karaan kuwo caadi ah, mood, raaxo, fudud sidaad jeceshahay. Nidaamkayaga dahaadhka iyo buuxinta midabka ayaa ka dhigaya shayga 'dhalaalkiisu mid waara, weliba, naqshado furan oo caan ah oo cusub ayaa diyaar kuu ah inaad doorato. Tilmaamaha: Designs U fur naqshado xulashada ● Qaabka, maaddada, cabbirrada, midabada loo habeeyay ● Midabka: salka leh dahaadhka, dusha rinjiyeynta, buuxinta midabka, daabacaadda Go Logo: Shaabadaynta, Kaydinta, Sawirka la sawiray, La xardhay, la daabacay, dhejiska epoxy. ● Xidhmada: 1pcs/boorso poly, xirxirida sanduuqa hadiyadaha ayaa la heli karaa ama waafaqsan shuruudaha macaamilka
Raaxada & xarrago Cufflink